Thit Htoo Lwin blog's status update.
ဂျယ်လီကြိုက်တဲ့ သမီးလေးတွေအတွက်.....ကျွန်မ သမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ စတိုးဆိုင် သွားတိုင်း သမီးတွေက ဂျယ်လီဝယ်ပေးဖို့ အမြဲတမ်းပူစာပါတယ်။
ကလေးတွေက ဂျယ်လီအရမ်းကြိုက်ပါတယ်၊ အရောင်လေးတွေကလည်းစုံ ၊ ချိုကလည်းချိုတော့ ကလေး
မီနစ်၂၀ လောက်ကြာတော့ စိတ်မရှည်တော့ဘဲ ကောင်တာစာရေးမဆီ တန်းသွားပြီး ပြောတယ်....
"ဟဲ့ကောင်မ...ငါ ငွေသွင်းဖို့စောင့်နေတာကြာလှပြီ၊ သောက်လူတန်းအရှည်ကြီးကို ဆက်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး၊"
မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဘ၀မှာ ဘွားအေနဲ့အတူ တရားပွဲတကာ အဖော်လိုက်ခဲ့ရသူမို့ ကလေးဘ၀ကတည်းက ခြေမျက်စိ အသားမာကလေးတက်နေအောင် ကာလေနဓမ္မသာဝနာ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကြာနီကန်ဆရာတော် တရားခွေများဆိုရင် အိမ်မှာ မနက်မိုးလင်းတိုင်း ဖွင့်နေကျဖြစ်တာကြောင့်
သင့်ချွေးပေါက်တွေဟာ မှန်ဘီလူးအောက်ရောက်နေသလို ကျယ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား??? စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေတဲ့ လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ကျဉ်းအောင်က အပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း သတိထားရပါမယ်။ ပြီးတော့
အလုပ်ကပြန်လာရင်လည်း အားကစားရုံမှာ ကြက်တောင်သွားရိုက်နေတတ်တယ်
သူ့မိန်းမက စဉ်းစားတယ် 'သူ့ယောက်ျား လူရိုးလူအေးကြီး၊ အပျော်အပါးအတွက် ဘယ်မှလည်း မရောက်ဖူးဘူး၊ ဒီနေ့ သူ့မွေးနေ့မှာတော့ ကလပ်တခုခုမှာ ညစာလိုက်ကျွေးအုံးမှ' ... ဆိုပြီး နာမည်ကြီး ကလပ်တခုကို ခေါ်သွားတယ်
Posted: 08 Jan 2014 06:38 PM PST
wheelchair ပေါ်က လူသား တစ်ယောက်၊ စက်အကူ မပါဘဲ ဆက်သွယ်မှု မလုပ်နိုင် ပေမယ့် အားမလျော့ဘဲ စကြဝဠာ ကြီးကို လေ့လာနေတဲ့ Stephen Hawking က ၈ရက်နေ့မှာ အသက် ၇၂နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
Stephen Hawking ကို၁၉၄၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၈ရက်နေ့မှာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ Oxford မှာမွေးဖွားခဲ့ ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက မောင်မောင်နဲ့အောင်အောင်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဒိသာပါမောက္ခ
ဆရာကြီး တစ်ဦးထံကို ပညာသင်ဖို့ အတူတူသွားကြတယ်။ ဆရာကြီးက သူ့ရဲ့ပညာတွေကို တပည့်နှစ်ဦးထံ ဆရာစားမချန် အိပ်သွန်ဖာမှောက်ပေးတယ်။ ပညာသင် သုံးနှစ်ပြည့်တော့ ဆရာကြီးက တပည့်နှစ်ဦးကို ခေါ်ပြီး အလုပ်နှစ်ခုခိုင်းတယ်။
မြန်မာတစ်ယောက်၊ ထိုင်းတစ်ယောက် နဲ့ အမေရိကန် တစ်ယောက်ဟာ
တစ်ချိန်ထဲမှာ သေဆုံးပြီး တမလွန်ရောက်သွားကြတယ်။
တမလွန်တံခါးဝမှာ ယမမင်းရဲ့ အပေါက်စောင့်နဲ့ တွေ့တယ်။
Zay Yar shared Nyein Chan Win's photo.
တစ်ခါတုန်းက… သားဖနှစ်ယောက် ကားတစ်စီးနဲ့ ခရီးသွားကြသတဲ့… သားက ကားကိုမောင်းပြီး အဖေကဘေးကထိုင်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်…။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကားမောင်းလာရင်း မထင်မှတ်ဘဲ…ရာသီဥတုအခြေအနေပြောင်းလဲလာ